ICision Yengeza Ukukala Kokumaketha Okunomthelela Ku-Cloud Yabo Yezokuxhumana | Martech Zone
ICision Yengeza Ukukala Kokumaketha Okunomthelela Ku-Cloud Yabo Yezokuxhumana
NgoLwesithathu, July 26, 2017 NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 Douglas Karr
Into ebalulekile okufanele uyikhumbule embonini yeMartech ukuthi izinkampani eziningi zisemjikelezweni wokuthuthuka oqhubekayo wokuhlukanisa nokukhulisa ibhizinisi labo. Ipulatifomu oyisebenzise eminyakeni embalwa edlule kungenzeka ukuthi ayisabikhona. UCision ungenye yalezi zinkampani engingazange ngizinake ngokweqiniso njengoba kufanele ngabe nginazo. Babengumholi wamasheya impela uma kukhulunywa ngobudlelwano bomphakathi, kepha selokhu bandise amakhono abo ku- ukumaketha kwamathonya imboni kakhulu.
Eqinisweni, basanda kumemezela izici ezintsha nezithuthukisi zomkhiqizo ku- I-Cision Communications Cloud, kufaka phakathi ukuhlanganiswa ne-Google Analytics ne-Adobe Omniture ukukala ifayela le- buyela ethonyeni izimali. Lokhu kubuyekeza kuzokwethula futhi I-Cision Data Connect, ikhono lokuqapha nokuhlaziya iziteshi ezintsha zemidiya yokuxhumana kanye nezici ezimbili ezintsha zeCision Influencer Graph: “You Can You Like,” ne- “Trending Influencers”.
Izici zeCision Communications Cloud Faka
Ukuphathwa kwemikhankaso ye-Multi-channel PR - ukunika amandla abasebenzisi ukuthi baqondise imikhankaso ye-PR kuziteshi zonke, abashukumisi, ukukhishwa kwabezindaba, ukufaka i-imeyili kanye nemithombo yezokuxhumana kudeshibhodi eyodwa yokusebenzisana.
Ukuhlanganiswa ne-Google Analytics ne-Adobe Omniture inika amandla abaxhumanisi ukuthi baxhumane nokuthonya ukufinyelela kanye nokusakazwa kwezindaba okuba umphumela wokwenza okwenziwa kuwebhu yenkampani yabo kanye nokuhlangenwe nakho kwe-e-commerce. Ngokubheka impumelelo yemikhankaso ye-PR ngokusebenzisa i-lens yewebhu analytics Amathuluzi, abaxhumanisi bangakhombisa ukuthi imikhankaso yemidiya etholakele iqhuba kanjani imali engenayo ye-e-commerce noma ukuthengiswa okuholayo ezindaweni zabo.
Isici se-Cision Influencer Graph "Ungathanda Futhi" inikezela ngezincomo eziqhutshwa yidatha ngokuya nge-geography yezithameli, ukubalwa kwabantu kanye nezintshisekelo ukusiza ukukhomba abagqugquzeli ku-Twitter abangafinyelela kumthengi wokugcina ohlosiwe. "Abathonya Abathrendayo" bavumela abasebenzisi ukuthi bathole abagqugquzeli njengoba bekhula bevelela esihlokweni esithile, ukuze bafinyelele kubo ngaphambi kokuba bafinyelele ukuthandwa.
I-Cision Comms Cloud manje ifaka phakathi I-Facebook, i-Instagram ne-Youtube okuqukethwe kwipulatifomu efanayo nezinto zokuphrinta, eziku-inthanethi nezokusakaza, ngaphezu kokuqukethwe okuvele kufakiwe ku-Twitter, okuvumela abasebenzisi ukuthi babheke indaba ephelele kuzo zonke iziteshi ezibalulekile. Amazwana, okushiwo, kanye namathrendi manje angahlukaniswa kalula yinkampani, umyalezo, abaphathi noma imikhiqizo.
Ukukhishwa kwakamuva kwe-Cision Comms Cloud kukhuluma ngezinselelo ezimbili ezinkulu embonini: ukuzulazula kwezokuxhumana ngokusebenzisa izinkulungwane zabathonya kanye neziteshi eziningi; nokunikeza umthelela wangempela, osezingeni eliphansi lebhizinisi kule mizamo. Izithuthukisi zemikhiqizo yanamuhla zinika amandla ochwepheshe bezokuxhumana ukumelana nalezi zinselelo ngqo, zihlonyiswe ngeplatifomu eyodwa ebanzi futhi enenjongo analytics nedatha. UKevin Akeroyd, isikhulu esiphezulu seCision
Tags: i-adobe omnitureukusikaidatha ye-cision ixhumai-cision influencer igrafuifu lezokuxhumanaizincomo zokuqukethweiziphakamiso zokuqukethweI-google analyticsukumaketha kwamathonyaisabelo sezwiabagqugquzeli abathrendayoungase uthande
I-New New Thing Podcast: Ngesivakashi Douglas Karr
I-LinkedIn Iqalisa I-Linkedin Website Demographics